राजधानीमा गत शनिबार सम्पन्न कार्यक्रममा स्वदेशी र बिदेशी गरी ४ सयको उपस्थीति रहेको थियो । ८७ वटा देशमा फैलिएको किवानिज बालबालिका तथा शिक्षाको क्षेत्रमा अग्रणी संस्थाको रुपमा रहेको छ । साँढे ६ लाख बिश्वभरी छरीएका किवानीजका सदस्यहरु मध्ये नेपालमा ११ सयको संख्यामा सदस्यहरु रहेका छन । सन २०१५ मा पहिलोपटक बरिष्ठ पर्यटन व्यावसायी तथा समाजसेवी मोहन लम्सालको नेतृत्वमा किवानीज नेपालमा ल्याईयो, र उनै लम्सालको अगुवाईमा ४५ औँ सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न भएसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा लम्सालको भुमिकाको पर्यटन बजारमा चर्चा चुलिँदो छ ।
किवानीज सम्मेलनको आवश्यक्ता किन र संस्थाको उदेश्यबारे सम्मेलन मूल आयोजक समारोह समितिका अध्यक्ष मोहन लम्सालसँग सोधेका थियौँ ।
४५ औँ किवानीज सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न भएसँगै व्यावसायीहरुमाझ र पर्यटन बजारमा तपाईले गरेको कामको प्रशंसा सुरु भएको छ, किवानीज सम्मेलनको उदेश्य के थियो ?
पर्यटन प्रवद्र्धन नै मुख्य उदेश्य हो । बालबालिकाको क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ लगायतका पक्षहरुलाई मजबुत बनाउन सकियो भने मात्र भोलीको नेपाल मजबुत हुनसक्छ भन्ने कुराको अनुभुति भएरै त्यस किसिमको बातावरण तयार गर्न किवानीज सक्रिय छ, त्यही उदेश्य प्राप्तीका लागि ४५ औ एसिया प्यासिफिक सम्मेलन राजधानीमा आयोजना भयो । १०५ वटा मुलकमा रहेको किवानीजको संगठनहरुका बिच नेपालका तर्फबाट कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने अवशर प्राप्त भयो, जुन भव्यताका साथ सम्पन्न पनि भयो, करिब ३ सय जना किवानीज सम्बद्ध बिदेशी पाहुनाहरु कार्यक्रममा सहभागि थिए । उनीहरु सबै खुसी भएरै फर्किए । स्वभाविक रुपमा कार्यक्रमको असर राम्रै पर्यो भन्ने लागेको छ ।
२. किवानीज बिदेशी संस्था, धेरै यसको नामसँग पनि परिचित छैनन, तपाई चै कसरी जोडिनुभयो ?
नेपालमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय भोलिन्टीएर संस्थाको रुपमा खोजी गर्दैजाँदा नै किवानीजसँग जोडिन पुगेको हुँ । यद्यपी म पहिलादेखी नै लायन्स क्लबमा आवद्ध थिएँ । इन्टरनेटमा सर्च गर्दै जाँदा किवानीज भेटियो । नेपालमा दर्ताका लागि सन २०१५ मा मेरै पहलमा काम सुरु भयो । सन २०१६ देखी अन्तर्राष्ट्रिय बिधी बिद्यान अनुसार टूरिजम प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले नेपालमा किवानीजका कामहरु सुरु भए । अहिले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएका छौ ।
३.बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्था पनि थिए, किवानीज नै नेपालमा ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता किन पर्यो ?
लायन्स क्लब नेपालमा किन ल्याउनुपर्यो भन्ने उत्तर तपाईलाई सोधेँ भने के भन्नुहुन्छ, उत्तर यसैमा छ । ठिक त्यसैगरी सन २०१५ मा नेपालमा भुकम्पपश्चात हामीले ठुलो क्षति बेहोर्यौँ । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्था पनि होलान तर हाम्रो सोच भनेको बालबालिकालाई नहप्काई, नतर्साई मायालु बातावरणमा उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाह गर्न सकेको खण्डमा उनीहरु जुन परिस्थीतिबाट हुर्किए, भोलिको समाज पनि उनीहरुले त्यसैगरी बिकशीत गर्नेछन भन्ने हाम्रो बुझाई हो । भुकम्पपछिको स्थीतिमा नुवाकोट तारुकामा ६ वटा सामुदायिक बिद्यालयमा यस किसिमको अभ्यास सुरु भएको छ । अन्यन्त्र पनि हाम्रो अभियान जारी नै छ ।
४. सम्मेलन आयोजना पछि व्यावसायीहरुले तपाईलाई के भने ?
प्रत्यक्ष भेट्दा ‘ग्रेट प्रोगाम’ भनेका छन । धेरै व्यावसायी साथीहरुले आफु पनि किवानीजको मेम्बर बन्न चाहेको बताए । केही साथीहरुले किवानीजका सदस्यहरु भेला पारेर छुट्टै क्लब निर्माण गरी आफू पनि बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्न तयार रहेको पनि कार्यक्रमकै दौरान बताएका थिए । यस अर्थमा कार्यक्रमको प्रभाव राम्रै परेछ, भन्ने मेरो बुझाई हो ।
५. कीवानीजलाई लिएर आगामी दिनमा तपाईको योजना के छ ?
आगामी (अक्टोबर देखी २०२१ सेम्टेम्बर ३०) सम्म नेपालका तर्फबाट कीवानीजको आधिकारिक ईलेक्ट अध्यक्षका रुपमा मेरो भुमिका सुरु हुनेछ ।
प्रत्येक १ बर्षमा किवानीज सम्मेलन हुने गर्दछ । आगामी मार्च १० देखी १३ तारिकसम्म जापानमा सम्मेलन हुँदैछ । क्रमशः अन्य देशमा कार्यक्रम भैरहँदा सन २०२५ मा नेपालमै पूनः एसिया प्यासिफिक सम्मेलन आयोजना गर्ने गरी अगाडी बढेको छु । दोस्रो सन २०३० मा किवानीजको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम आयोजना गरी १५ हजार बिदेशीलाई एकसाथ काठमाण्डौमा उतार्ने गरी अगाढी बढेको छु । तत्कालको स्थीतिमा पर्यटन क्षेत्र केही अप्ठेरो स्थीतिमा भएपनि होटलहरुको संख्या बृद्धि हुने क्रम जारी छ । यदी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम नेपालमै आयोजना हुन सकेको खण्डमा नेपालको पर्यटनले नयाँ उचाई कायम गर्नेछ भन्ने मेरो बुझाई हो ।